Soo dejisan Avast Premier 20.5.5410 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudAvast Premier
Qeybta: Difaac guud
Bogga rasmiga ah: Avast Premier
Wikipedia: Avast Premier
Avast Premier – software-ka koowaad ee leh qalab antivirus iyo antispyware ah ee ilaalinta dhamaystiran ee aad computer. Software wuxuu leeyahay tiknoolajiyada horumarsan si looga saaro xajinta, ilaalinta shabakada guriga iyo xayiraan falalka shakiga leh. Avast Premier wuxuu bixiyaa habab kala duwan oo ah skaanka nidaamka oo ay ku jiraan baaritaan caqli ah si loo ogaado dhibaatooyinka nidaamka kala duwan. Software wuxuu siiyaa nabadgelyo dhamaystiran iyo asturnaanta internetka iyada oo ay ugu wacan tahay moduleka anti-spam, oo lagu dhisay dab-damis, ilaalinta webcam, surfiga VPN iyo bogagga been-abuurka ah. Avast Premier wuxuu leeyahay khiyaaro gaar ah oo si joogto ah looga saaro macluumaadka xogta aan loo baahnayn, si toos ah u cusbooneysii qoraalada software-ka iyo farqiga u dhaxeeya PC. Software wuxuu ka kooban yahay muuqaal si loo hagaajiyo waxqabadka kombuyuutarka oo laga saaro xog aan loo baahnayn. Avast Premier ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad hubiso faylasha shaki laga galo oo aad u isticmaashid codsiyo halis ah oo ku yaalla deegaan gooni ah oo aan u hanjabin kombiyuutarka
Teknoolojiyada casriga ah ee casriga ah
Cusbooneysiinta qalabka software-ka
Ka ilaalinta ilaalinta webcamka
Sandbox iyo maamulaha sirta
Soo dejisan Avast Premier
Avast Free Antivirus – mid ka mid ah kaabayaasha ugu caansan ee leh uruurinta hodanka ah ee astaamaha amniga, tikniyoolajiyada barashada mashiinka, iyo kayd macluumaad oo ballaaran si loo ogaado khataraha.
Avast Clear – waa qalab aad kombiyuutarkaaga ku nadiifin karto xogta Avast ee aan loo baahnayn oo ay ku jiraan faylasha, darawalada iyo galitaanka diiwaanada kuwaas oo had iyo jeer sii jira ka dib marka laga saaro alaabada fayraska Avast.
Badbaadada Internetka Avast – waa barnaamijyo loogu tala galay kahortaga kombiyuutarkaaga oo dhan si looga hortago hanjabaado badan oo ku faafa internetka.
Faallo ku saabsan Avast Premier
Avast Premier Xirfadaha la xiriira
Tani waa antivirus dhamaystiran oo leh heer aad u sareeya oo difaac ah oo ka dhan ah ransomware, viruses, spyware, nacas iyo hanjabaado kale oo internetka ah.
Dabka bilaashka ah – Xaabada si loo xakameeyo marin u helka nidaamka isticmaalaha internetka isla markaana la joojiyo barnaamijyada laga shakiyo ee iskudaya inay galaan internetka.
AVG Internet Security – waa fayruus caan ah oo leh teknolojiyada daruuriga casriga ah si aad uga ilaaliso kombiyuutarkaaga faylalka ugu caansan, khayaamada iyo waxay ku siisaa amniga asturnaanta internetka.
ESET Smart Security Premium – fayraska difaaca PC ee ugu badan ee ka hortagga shabakadda iyo hanjabaadaha maxalliga ah. Waxaa jira maamule furaha-ku-gal gudaha ah iyo kaydinta faylka qarsoon.
Tani waa xal dhammaystiran oo antivirus ah oo ka yimaadda horumarinta Ukraine ee ilaalinta firfircoon ka dhanka ah fayrasyada, nacabka iyo spyware.
F-Secure Anti-Virus – virus-ka ayaa si wax ku ool ah u tirtira falalka isla markaana wuxuu ka hortagaa infekshan dheeraad ah ee kombiyuutarkaaga oo leh duulayaashan la midka ah.
Kodi – aalad loo beddelo kombiyuutarkaaga xarun xarun warbaahinta ama tiyaatarka guriga. Software-ka wuxuu taageeraa xakameynta fog wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad ku xirto isugeynta.